အကောင်းဆုံးဆိုတာဘာလဲ Multi Lane Bottom Sealing Bag စက်? အကောင်းဆုံး Multi Lane Bottom Sealing Bag စက် အရည်အသွေးအကောင်းဆုံးကိုထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ ဖြန့်ဝေသူနှင့်စက်ရုံမှရှာဖွေရန်။
အိတ်ကို Roll Machine တွင်ထားပါ။
Multi Lane Bottom Sealing Bag စက်
ပုံစံ - SS Series
စျေးဝယ်အိတ်များနှင့် ရိုးရိုးအိတ်များအတွက် အလွယ်တကူ အလုံပိတ်ဓားဖြင့် လဲလှယ်ပါ။.
အီလက်ထရွန်းနစ် clutch နှင့် ဘရိတ်အသုံးပြုခြင်းကို 1mm အတွင်း တိကျသောအိတ်ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့် တံဆိပ်ခတ်ခြင်းတို့ကို သေချာစေသည်။.
အာရုံခံကိရိယာသည် ဖလင်လိပ်များ၏ ထည့်သွင်းမှုကို ထိန်းချုပ်သည်။,တင်းမာမှုမရှိဘဲ ပြီးပြည့်စုံသော အလုံပိတ်လိုင်းကို အာမခံသည်။.
ရုပ်ရှင်သည် အလွတ် သို့မဟုတ် ပိတ်နေပါက အလိုအလျောက် ရပ်သည်။.
ပရင့်အာရုံခံကိရိယာများသည် ပုံနှိပ်အိတ်များအတွက် တိကျမှုကို အာမခံပါသည်။. (ရွေးချယ်ခွင့်)
လိုင်း x W x L(မီလီမီတာ) အထူ
L x W x H(အမ်)
အမျိုးအစား SS4-700V 1x2x680x1200
2x2x305x1200 0.008~0.၁၅ 30~၁၆၀x၄ 7.6KW 4.၂၅x၁.၅၅x၁.99
2x2x355x1200 8KW 4.၂၅x၁.၆၅x၁.99
2x2x455x1200 9.5KW 4.၂၅x၁.၈၅x၁.99
၃x၂x၂၂၀x၁၂၀၀ 30~၁၆၀x၆ 8.8KW 4.၄၁x၁.၆၅x၁.99
၃x၂x၃၂၀x၁၂၀၀ 10.3KW 4.၄၁x၁.၈၅x၁.99
အမျိုးအစား SS4-700 1x2x680x1010
၂x၂x၃၀၅x၁၀၁၀ 0.008~0.၁၅ 30~၁၁၀x၄ 6.2KW 4.၂၅x၁.၅၅x၁.99
2x2x355x1010 6.6KW 4.၂၅x၁.၆၅x၁.99
2x2x455x1010 30~၁၀၅x၄ 6.8KW 4.၂၅x၁.၈၅x၁.99
၃x၂x၂၂၀x၁၀၁၀ 30~၁၁၀x၆ 7.5KW 4.၄၁x၁.၆၅x၁.99
၃x၂x၃၂၀x၁၀၁၀ 30~၁၀၅x၆ 7.7KW 4.၄၁x၁.၈၅x၁.99
သတ်မှတ်ချက်များသည် အသိပေးခြင်းမရှိဘဲ ပြောင်းလဲနိုင်သည်။.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.carrybagmachine.com/my/multi-lane-bottom-sealing-bag-machine.html
SHENG-FON PLASTIC MACHINE CO., LTD. အတွက်အထူးပြုဖြစ်ပါတယ် Multi Lane Bottom Sealing Bag စက် ထုတ်လုပ်သူ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း။ Excellent ကအရည်အသွေး, အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှု, အလုပ်အကိုင်, ကြည်ဖြူကျွန်တော်တို့ရဲ့ clients များရာမှရရှိခဲ့သည့်အပြုသဘောဆောင်သော feedbacks ဖြစ်ကြ၏။ သူတို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်များအားလုံးအတွက်ဈေးကွက်ထဲမှာအပြုသဘောဆင်းတုများရောနှောနေခြင်းမှကျွန်တော်တို့ကိုကူညီသူတို့သည်ငါတို့ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း clients များ၏လူအပေါင်းတို့အားကျွန်ုပ်တို့ကတိတော်များရှိသည်။ ကျွန်တော်တို့ဟာအမြင့်ဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ client များပေးသင်နှင့်အတူအောင်မြင်မှုအသီးအပွမျှဝေဖို့ကျွန်တော်တို့ကို enable မှအသံအနေအထားတွင်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီ၏ပိုကောင်းတဲ့ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုတိုးတက်လာသောလက်တွဲဖော်စေနိုင်ပုံပေါ်မှာသင့်ရဲ့အကြံပြုချက်များနှင့်အကြံဥာဏ်များကြိုဆိုပါတယ်။ 100% အရည်အသွေးမြင့်စစ်ဆေးမှုများဖောက်သည်အဆုံးလက်ကိုအပ်လိုက်တဲ့အခါကုန်စည်အရည်အသွေးမြင့်မားစံနှုန်းဖြစ်ကြ၏သေချာစေရန်လုပ်ဆောင်ကြလိမ့်မည်။
နောက်-service ကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာ။ အပြင်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုကိုသာအကောင်းဆုံးနှင့်အပြစ်ဆိုဖွယ်မရှိသော gamut စျေးကွက်အတွင်းမှကယ်နှုတ်တော်မူ၏ကြောင်းအာမခံပါသည်။
သို့: SHENG-FON PLASTIC MACHINE CO., LTD.
Single Lane Bottom Sealing Bag စက်
အကောင်းဆုံး Multi Lane Bottom Sealing Bag စက် ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်အတွက်သင်သည် Multi Lane Bottom Sealing Bag စက် မှထုတ်လုပ်သော၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ Taiwan ရှိစက်ရုံတစ်ရုံ
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.carrybagmachine.com/single-lane-bottom-sealing-bag-machine.html
Multi Lane Bottom Sealing Bag Machine	| Machine De Scellage De Fond À Plusieurs Voies	| Mehrspurige Bodensiegel Beutelmaschine	| Многополосная Машина Для Запечатывания Нижних Паке	| Máquina De Selagem De Fundo De Várias Pistas	| Macchina Per Sacchetti Sigillanti Inferiori A Più	| मल्टी लेन बॉटम सीलिंग बैग मशीन	| Máquina De Bolsas De Sellado Inferior De Múltiples	| Machine voor het afdichten van zakken met meerdere	| آلة ختم الأكياس السفلية المتعددة الممرات	| Máy đóng túi đáy đa làn	| เครื่องซีลปากถุงแบบหลายเลน	| Mesin Tas Penyegelan Bawah Multi Lane	| মাল্টি লেন বটম সিলিং ব্যাগ মেশিন	| Çok Şeritli Alt Sızdırmazlık Torbası Makinası